ဘုရားကိုပစ် ငါမှာနစ် | အမေးများအတွက် အဖြေလွှာ
စာတန်မာရ်နတ် December 10, 2009
Filed under: ဘုရားကိုပစ် ငါမှာနစ် — amayaphay @ 9:40 am
ဘုရားက စာတန် မာရ်နတ်ကို လောကတွင် ဘာ့ကြောင့်ခွင့်ပြုထားပြီး သူ့ထံမှတန်ခိုးကိုဘာ့ကြောင့်ပြန်မရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသနည်း?
မာရ်နတ်သည် အစက ကောင်းကင်တမန်မင်း လူစီဖါဖြစ်ပါသည်။ ဘုရား၏ နေရာကို ယူဖို့ကြံစည်သောကြောင့် ကောင်းကင်ဘုံမှ နှင်ချခံရပါသည်။ သူသည် ကောင်းကင်ဘုံမှကောင်းကင်တမန် သုံးစုတစ်စုကိုစည်းရုံး ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး ယနေ့ ဘုရားဖန်ဆင်း ထားသောလူများအား ကိုးကွယ်မှုမှလွဲမှားရန် တန်ခိုးနိမိတ်မျိုးစုံဖြင့် အယောင်ဆောင်လှည့်ဖျားနေသော မုသာ၏ အဖလည်းဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့် မသင့်မြတ်လို့ လမ်းခွဲကြသည့်အခါ သူ့ထံမှ မိမိပေးထားသော လက်ဆောင်များပစ္စည်း များ ပြန်မတောင်း တတ်သကဲ့သို့ ဘုရားကမာရ်နတ်ကိုနှင်ထုတ် သောအခါတွင် လည်း သူ့ထံမှ တန်ခိုးကိုပြန်မရုပ်သိမ်းခဲ့ပါ။ မကောင်းမှုမှန်သမျှ မာရ်နတ်ထံမှ လာပါသည်။ လူတို့သည်အစစအရာရာပြည့်စုံနေပါက ဘုရားဟူသည် မလိုအပ်တော့ပါ။ ဥပမာ ဘုရားကျောင်းနှင့် ဝေးကွာနေသော မိသားစုတစ်စု တစ်နေ့ သူတို့၏သား နာမကျန်း ဖြစ်ကာ ဆရာဝန်လက်လျှော့သောအခါမှ ဆုတောင်းပေးကြရန် ဘုရားကျောင်းသို့ ရောက်လာကြပါသည်။ မကောင်းပေဘူးလား။ မာရ်နတ်သည်လည်း ဘုရားသခင်၏ အကြံစည်တော်ထဲမှ အလုပ်လုပ်နေသူပင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် မာရ်နတ်နှင့် နောက်လိုက်အပေါင်းပါတို့သည် တစ်နေ့ ထာဝရငရဲမီးအိုင်ထဲသို့ သွားကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ငရဲသည် မာရ်နတ်နှင့် နောက်လိုက်အပေါင်းပါတို့အတွက်သာ ဖန်ဆင်း ထားခြင်းဖြစ်လို့လူများရွေးချယ်မှုမမှားယွင်းမိကြရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
(ဟေရှာ ၁၄း၁၂-၁၅၊ ယော ၈း၄၄၊ ဗျာ ၂၀း၁၀)
ကောင်းကင်သုံးထပ် ( ၂ကော ၁၂း၂-၄၊ ဧ ၂း၂၊ ၂ကော ၄း၎၊ ယော ၁၂း၃၁)
ပထမကောင်းကင်သည် လေထုရှိသော လေယဉ်များပျံသန်းနိုင်သည့်နေရာဖြစ်ပြီး ဒုတိယ ကောင်းကင်မှာ နေ၊ လ၊ ကြယ်များ ရှိရာ နေရာ ဖြစ်ပါသည်။ တတိယကောင်းကင်ဘုံမှာ ထိုစကြာဝဠာကြီးရဲ့အထက် မျက်မြင်မရသောဘုရားရှင်တည်ရှိရာ ကောင်းကင်ဘုံ ဖြစ်ပါသည်။ မာရ်နတ်သည် ကောင်းကင်ဘုံမှနှင်ချခံရပြီး ပထမကောင်းကင်နှင့်ဒုတိယ ကောင်းကင်တွင် အလုပ်လုပ်နေပါသည်။
Filed under: ဘုရားကိုပစ် ငါမှာနစ် — amayaphay @ 9:29 am
ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်ကြောင်း သက်သေအခိုင်အမာရှိပါသော်လည်း ယေရှုကိုလက်မခံနိုင်သောသူများ ဘာ့ကြောင့်ရှိနေရပါသနည်း?
ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်ခြင်းနှင့်သေခြင်းတရားကို အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း သမိုင်းသက်သေများခိုင်လုံစွာမရှိလို့မဟုတ်ပါ၊ လွဲမှားသည့်ဒဿန အတွေးအခေါ်များ နှင့် မိမိအသိကို ပိတ်ထားသောကြောင့်စစ်မှန်သော အမှန်တရားသည်သူတို့အထဲသို့ မဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်း မြေကြီးပေါ်မှာရှိသော မောရှေမှစ၍ ပရောဖက်တို့၏ စကားကို လက်မခံလျှင် သေသောသူထဲမှဆင်း ပြောလည်း လက်ခံနိုင်ကြလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။ (လု ၁၆း၃၁)
ယနေ့ ကမ္ဘာကြီးတွင် ဘုရားပေါင်းမြောက်များစွာရှိနေပါသည်။ လူအချို့ တို့သည် ရှေးယခင်အချိန်က နွားအားဖြင့်သာ ထွန်ယက် စားသောက်ကြရသောကြောင့် နွားကို ကျေးဇူးရှင်အနေဖြင့် ဘုရားဟုပင်သတ်မှတ်ကာ ကိုးကွယ်လာခဲ့ကြပါသည်။ ယခုအခါ ထွန်စက် တစ်စင်းဖြင့် တစ်နေ့ကို လယ်မြေဧက ၅၀ဝ ခန့်ထွန်ယက် စိုက်ပျိုး နိုင်ပြီး အချိန်ကုန်လူပန်းသက်သာစေသော ကျေးဇူးကိုရကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လူတို့သည် ထွန်စက်ကိုတော့ မကိုးကွယ်ပါဘဲ ရှေးရိုး အစဉ်အလာအရ နွားကိုသာကိုးကွယ်နေကြဆဲဖြစ်ပါသည်။
ထိုနည်း၎င်းဘုရားမှန်ကိုမသိခဲ့သည့်အတွက် မိရိုးဖလာအရ ဘုရားဖြစ်ကြောင်း ပြုခဲ့သောအမှုနှင့် အဆိုအမိန့် သက်သေမရှိပေမည့် ထိုအရှင်ကိုသာ ကိုးကွယ် လာခဲ့ကြသော်လည်း ယနေ့ ဘုရားစစ်အကြောင်း ကိုသိလာကြပေမည့် မိရိုးဖလာ ဘုရားကို မစွန့်နိုင်ကြခြင်းမှာ မိမိ၏ အတ္တစွဲ လွဲမှားသည့် ရွေးချယ်မှုသာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။